ईतिहास झल्काउने महत्वपूर्ण स्थलहरु - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
ईतिहास झल्काउने महत्वपूर्ण स्थलहरु
प्रकाशित मिति : सोमवार, भदौ २३, २०७१
बाँदरबाट परिमार्जन भएर मान्छे भएका हौं भन्ने हामीले सुनेका र पढेका हौं । तर कसरी भयौं कल्पना गर्न गा¥हो छ । हामी यहाँसम्म आईपुग्दा नसोचेका विकास भएका छन् । कसरी भाषा सुुरुवात भयो ? कसरी धर्म सुरु भयो ? हाम्रा दस्तावेज नै हाम्रा ईतिहास हुन् । लेखिएका पुस्तक, किंवदन्तीबाटै हाम्रा ईतिहास जिवित हुने हुन् । हाम्रा पुराना रितिरिवाज र मौलिकता झल्काउने धेरै ठाउँकामाध्यमले पनि हामी पुर्खाको अनुमान लगाउन सक्छौं र त्यो समयको अवस्था बुझ्न सक्छौं । जसले अगाडिका पुस्ताहरुको रहनसहन, वातावरण, संस्कारको कल्पना गर्न सहज गराइदिन्छ ।
यो ठाउँ देखेका छांै, वास्तविकतामा नभई कम्प्यूटर डेक्सटपको वालपेपरमा । ईंग्ल्यान्डको विल्टसिरीमा रहेको स्टोनहेंज प्रागऐतिहासिक (लिखित शब्दको उत्पति हुनु भन्दा पहिले मानिसको विकास सम्बन्धि) स्मारक हो । यहाँ ३० वटा ७.५ मिटर लामा २५ टनसम्मका ढुङ्गाहरु छन् । यो संसारको प्रसिद्ध ठाउँहरुमध्ये एक पर्दछ । पुरातत्वविदहरु यो २०००–३००० वि.सी मा बनाएको र यो चिहानको रुपमा प्रयोग भएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । यहाँका ढुङ्गाहरु कसरी राखिए भन्ने विषय अझै रहस्यमै छ । आधुनिक मेसिन र अन्य साधन नभएको त्यो समयमा त्यो आकार र बनोट बन्नु आश्चर्यजनक कुरा हो । स्टोनहेंज सन १९८१ मा विश्व सम्पदा सूचिमा सूचीबद्ध भएको हो ।
पेरुमा रहेको यो माचू पिकु ३२ हजार ५९२ एकर्स जमिनमा ७ हजार ९७० फिट माथिको उचाइमा छ । पुरातत्वविदहरु यो ठाउँ तत्कालिन सम्राटहरुको बासस्थलको लागि बनाइएको अनुमान गरिन्छ । यहाँ रहेका पोलिस्ड स्टोन र स्टोनमा रहेका चित्रले यहाँको रहस्य बढाएको छ । यो ठाउँलाई ‘लस्ट सिटी अफ इन्का’ पनि भनिन्छ । यहाँ ३० प्रतिशत ठाउँको पुनः निर्माण गरिएको छ । विश्वभर गरिएको इन्टरनेट सर्वोक्षणले यो संसारको नया सातै आश्चर्य बताएको छ । यो सन १४३८ मा बनेको अनुमान गरिन्छ । यो ठाउँलाई पवित्र स्थल तथा संसारको एक रहस्यमय ठाउँको रुपमा पनि चिनिन्छ । माचू पिकु १९८३ मा विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिबद्ध भएको हो ।
भारतको मध्य प्रदेशको साँची सहरमा रहेको साँची स्तुपा भारतको सबैभन्दा पुरानो स्टोन आर्ट हो । सम्राट अशोकको पालामा अशोकले कामदार खटाएर यो स्तुपा बनाएका हुन् । यो स्तुपाले बुद्धको अस्थित्वलाई झल्काउँछ । यो स्तुपा तेश्रो शताब्दीमा बनेको हो । यहाँ ३ वटा मुख्य स्तुपा र ५० भन्दा बढि बुद्धका ठूला स्मारक (कसैको सम्झनामा अथवा कुनै ठाउँको अस्थित्व बचाउन बनाइएको) रहेका छन् । यो ठाउँलाई बुद्धको अन्तिम अबशेष लिएको ठाउँ मानिन्छ । यहाँका स्मारकहरुलाई १९८९ देखि विश्व सम्पदाको सुचीमा पनि राखिएको छ । यो भारतमा रहेको बुद्धको सबैभन्दा पुरानो स्तुपा पनि हो । यहाँ बुद्धको ज्ञान प्राप्ति, विकास र निधनलाई राम्ररी झल्काइएको छ ।
इजिप्टको निले डेल्टामा रहेको ट्यानिस डिज्यानेटको रुपमा पनि चिनिन्छ । इजिप्ट र ग्रिकको पुराना चलनचल्ती र वातावरण अनुमान गर्न सकिने पुरातत्वविदहरु बताउँछन् । यो ठाउँ एकाइसौं इजिप्टीयन राजाको पाला १०३९ वि.सी मा बनेको अनुमान गरिएको छ । यहाँका कडा माटाका पिल्लर र त्यसमा रहेका चित्र र आर्टमा धेरै रहस्य लुकेका छन् । १९७९ मा विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिबद्ध भएको यो ठाउँ राजाको शव समाधिका लागि प्रयोगमा आएको हुन सक्ने या धार्मिक स्थल भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
नवौं शताव्दीदेखि पन्ध्रौं सताव्दीकोबीचमा बनेको यहाँ कम्वोडियाली साम्राज्य रहेको थियो । कम्बोडियामा रहेको यो सन ८०० मा बनेको अनुमान गरिएको छ । एक हजार भन्दा बढि मन्दिर भएको यो संसारको एक मात्र धार्मिक स्थल हो, जहाँ वार्षिक २ मिलियन भन्दा बढि मानिसहरु जान्छन् । यहाँ मुख्य ७२ वटा र अन्य हजार वटा मन्दिर रहेका छन् । १ हजार २०० भन्दा बढि शिलालेखहरु रहेको यहाँ हेड हन्टिङका चित्र कोरिएका विभिन्न टावरहरु छन् । यो मन्दिरको क्षेत्रफल पुुर्वबाट पश्चिमसम्म ८ कि.मी र उत्तरबाट दक्षिणसम्म ४८ कि.मी रहेको छ । यो १९९२ मा विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिबद्ध भएको हो ।